स्कूल समय देखि, हामी आइंस्टीन को कानुन अनुसार, प्रकाश को गति को जानते हो, ब्रह्मांड मा एक अपरिहार्य अधिकतम हो। सूर्यबाट पृथ्वीसम्मको दूरी 8 मिनेट हो, जुन 150 000 000 किलोमिटर छ। नेप्च्यून6घण्टासम्म पुग्छ, तर स्पेस वाहनों ले दशैंहरु लाई यस्तो दूरी को दूर गर्न लगाउँछन्। तर सबैलाई थाहा छैन कि गतिको मूल्यले हल्का पासोमा वातावरणमा निर्भर गर्दछ कि फरक फरक पर्दछ।
हल्का गतिको लागि सूत्र
एक वैक्यूममा प्रकाशको गति जान्दछ (≈3* 10 8 m / s सँग), हामी यसलाई अन्य म्याग्दीमा निर्धारण गर्दछौं, यसको अपवर्तक सूचकांक n। प्रकाश को गति को धेरै सूत्र भौतिकी देखि यांत्रिकी को कानुन को अनुसार जस्तै, या बल्कि, वस्तु को समय र गति को उपयोग गरेर दूरी को परिभाषा।
उदाहरणको लागि, हामी एक गिलास ले 1.5 को अपवर्तक सूचकांक को साथ। हल्का गति सूत्र सूत्र प्रयोग गरेर V = c \_ n, हामी फेला परेका छौं कि दिइएको माध्यममा वेग 200,000 किलोमिटर / छ। यदि हामी पानी जस्तै तरल लिन्छौं, त्यसमा फोन्सहरूको प्रकृया गति (हल्का कणहरू) 1.33 को अपवर्तक सूचकांक 226,000 किलोमिटर छ।
हावामा लाइटको गतिको लागि सूत्र
वायु पनि वातावरण हो। नतीजा, यसमा एक भनिन्छ अपिकलिकल घनत्व। यदि भिक्षुहरूमा आफ्नो मार्गमा अवरोधहरू पूरा गर्दैन भने, त्यसपछि एक माध्यममा उनीहरूले परमाणु कणहरूको उत्तेजनामा केही समय बिताउँछन्। दहन वातावरण, यो उत्तेजनाको लागी धेरै समय लाग्छ। हावा मा अपवर्तक सूचकांक (एन) 1,000,92 छ। र यो 29 9,792,458 m / s को सीमा देखि पर्याप्त रूप देखि नहीं छोड्छ।
अमेरिकी वैज्ञानिकले प्रकाशको गति लगभग शून्यमा ढिलो गर्न सकेन। 1/299 भन्दा बढि 792 458 सेकेन्ड लाइट गतिमाथि विजयी हुन सक्दैन। चीज हो कि प्रकाश एक ही विद्युत चुम्बकीय लहर को रूप मा एक्स रे, रेडियो तरंग या गर्मी को रूप मा छ। अंतर केवल तरंगदैर्ध्य र आवृत्ति बीचको भिन्नतामा छ।
एक रोचक तथ्य फोटोनको सामूहिक कमी हो, र यसले दिएका कणको लागि समयको अनुपस्थितिलाई संकेत गर्दछ। यसलाई सजिलै राख्न, एक फोटोको लागि जुन धेरै लाख, वा अरबौं वर्ष पहिले पनि उत्पन्न भएन, दोस्रो नतिजा पारित भयो।
प्रकृतिमा भौगोलिक प्रक्रिया के हो?
पाठमा वाक्यहरू लिङ्क गर्ने विधिहरू। वाक्यहरूमा शब्दहरूको सम्बन्ध
ढिलाइ - के यो छ? संज्ञानात्मक विचलन को सिद्धांत, साथ नै संगीत र भावनाहरु मा असंगत को अभिव्यक्ति
संसारको 10 भन्दा धेरै असामान्य स्कूलहरू
ब्लूबेरी कहाँ बढ्न? उपनगरहरुमा ब्लूबेरी बढ्दै कहाँ? जहाँ यो रूस मा ब्लूबेरी बढ्छ वन,
भाडामा prolactin गर्दा? तयारी को मुख्य चरणमा बारेमा हामी सिक्न
घोडा-रेसिंग जटिल "Bitza"। पूरा र आउन
बगैंचामा क्षेत्रमा बढ्दै phlox।
अनन्त जीवनको प्रतीक के हो? Ankh: प्रतीक मूल्य